Mpiasa an-tsehatra 6 sy mpandeha 26 no matin'ny fianjerana fiaramanidina rosiana tany Syria
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mpiasa an-tsehatra 6 sy mpandeha 26 no matin'ny fianjerana fiaramanidina rosiana tany Syria
Fiaramanidina fitaterana miaramila rosiana iray no nianjera nandritra ny fipetrahana tao amin'ny Khmeimim Airbase any Syria, hoy ny minisiteran'ny fiarovam-pirenena rosiana. Mpiasa an-tsambo enina ary mpandeha 26 koa no maty tamin'io fianjerana io, hoy ihany izy.
Raha ny angom-baovao hatrany dia mety ho tsy fahatomombanana ara-teknika no nahatonga ny tranga, hoy ny minisitera.
"Manodidina ny tamin'ny 15:00 (ora Mosko, 12:00 GMT), fiaramanidina fitaterana An-26 Rosiana no nianjera rehefa tonga hiondrana amin'ny seranam-piaramanidina Khmeimim," hoy ny fanambarana navoakan'ny minisitera. "Maty [tamin'io tranga io] ireo rehetra tao anaty sambo," hoy izy nanampy.
Niakatra tamin'ny tany 500 metatra teo ho eo ny fiaramanidina. Tsy nirehitra izany talohan'ny nitrangan'izany, hoy ny tafika rosiana.
Ny Antonov An-26 dia fiaramanidina turboprop maotera maotera namboarina ho toy ny fiaramanidina fitaterana taktika maro samy hafa. Namboarina tany amin'ny Firaisana Sovietika izy tamin'ny taona 1960. Manodidina ny 450 ny fiaramanidina toy izany no mbola miasa, ka ny ankamaroan'izy ireo dia ampiasain'ny tafika rosiana.
Rosia dia nanatri-maso tranganà rivotra maromaro tany Syria. Tamin'ny tranga tahaka izao dia nisy helikoptera Mi-24 nianjera vokatry ny lesoka ara-teknika teo akaikin'ny seranam-piaramanidina miaramila Syriana Hama tamin'ny alin'ny Taom-baovao. Maty avokoa ireo mpanamory ilay helikopa.
Manidina mankany Tel Aviv amin'ny Air India: Nanokatra habakabaka i Saudi Arabia ho an'ny sidina fohy kokoa